DHAC FARSAMAYSAN OO HAWEENAY HARGEYSA KU GELELAFTAY | Toggaherer's Weblog
Beryahan danbe ayaa waxa si aad iyo laxaad ah loo hadal hayay Macaash aan hore loo arag oo haweenay ayy siin jirtay dadka lacag u dhiibta. Haweenaydan oo magaceeda lagu sheegay Faadumo ayaa waxay siin jirtay qof kasta oo lacag u keensada 150 Dollar kun kasta Bil kasta. Tani waxay u ka dhigan tahay haddii aad keensato 10 000 (Toban kun oo dollar) waxaad bil ay siinaysay 1500 ( kun iyo shanboqol oo doolar).
Faa, idada laaca ahayd ayaa waxay soo jiidatay dad aad u farabadan kuwasoo badankoodu ahaayeen dumar. Inkasta oo culimadu aad uga digtay hawsha haweenaydani waday oo in badan dadka ay uga digeen hadana dheg jalaq looma siin.
Iminka oo la laayahay haweenaydaasi jaaniyo cidhib meesha ay dhigtay, ayaa waxa is dhaafaya gawaadhida raacdaynaysa meesha ay ku danbaysay. Lacagta gabadhani la jarmaaday ayaa waxa lagu qiyaasayaa malaayiin doolar inay gaadhayso. Si kastaba ha ahaatee dadka la dhacay ayaa waxa isugu darsamay laba naxdin .
(a) Waa middde iyagoo xaaraan lacag loogu sheegay culimaduna uga digaan aan ku joogsan
(b) Waa arinka labaade iyagoo maanta aduunkoodii meel ay u raacaan aan garanayn .
Xafiiska warqabdka Toggherer.